Bayle “Masuuliyiinta DF labo mushaar ma qaataan” – Balcad.com Teyteyleey
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Federaalka Soomaliya Dr. C/raxmaan Ducaalle Bayle ayaa waxa sheegay masulliyiinta Dowladda Federaalka in aysan qaadan laba mushaar, taasi oo uu ula jeedo Qofka xildhibaanka iyo Wasiirka isku ah inuusan qaadan laba mushaar, oo uu qaato Hal mushaar.
Waxa uu sheegay masuulka Dowladda Federaalka ka tirsan ee labada xil isku haya in uu xaq u leeyahay hal mushaar, maadaama Dowladda Federaalka ay tahay mid hada aanan awoodin in dhaqaale fara badan ay bixiso.
Sidoo kale Wasiir Bayle ayaa sheegay Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay qaataan mushaarkooda ay xaqa u leeyihiin bil kasta, lana weydiin karo Taliyeyaasha Ciidamada, oo mushaarka loogu dhiibo.
Dhanka kale C/raxmaan Ducaalle Bayle Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sharaxay canshuurta Dowladda Federaalka ay qaado qaabka loo maareeyo iyo meelaha lagu kala bixiyo.
Dhowaan ayay aheyd markii Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Xasan Cali Khayre uu sheegay ahmiyada koowaad Dowladda Federaalka in ay siiso Ciidamada, si ay u helaan dhiiragelin, ayna dalka uga saaraan ururka Al Shabaab.
The post Bayle “Masuuliyiinta DF labo mushaar ma qaataan” appeared first on Ilwareed Online.